यूट्यूब दोहोर्याउनुहोस् - सजीलो लुप यूट्यूब भिडियो - कुनै अवरोध बिना संगीत सुन्नुहोस्
लूप र दोहोर्याउनुहोस् युट्यूब भिडियोहरू
रीप्ले थिच्न बिना युट्यूब भिडियोहरू फेरि प्ले गर्नुहोस्
सजिलो तरिकामा YouTube भिडियोहरू लुप गर्नुहोस्। YouTube लूप प्रयोग गरेर तपाईं पूरा भिडियो दोहोर्याउन सक्नुहुनेछ वा यसको केही अंश छान्न सक्नुहुन्छ, यूट्यूबमा खोज्नुहोस्, बहु भिडियोहरू एकै समयमा सुरू गर्नुहोस्!
खोज्नुहोस् वा युट्यूब दोहोर्याउनुहोस्।
YouTube लूप प्रयोग गरेर पूर्ण वा आंशिक YouTube भिडियोहरू दोहोर्याउनुहोस्
यूट्यूब पुनरावर्तकले माउसको केहि क्लिकहरू सहित कसैलाई पनि YouTube भिडियोहरू वा भिडियोहरूको समयबद्ध भागहरूलाई लुप गर्न अनुमति दिन्छ। अन्तहीन संगीत भिडियोहरू, हास्यास्पद भिडियो दृश्यहरू, वा दर्शक भिडियोहरू जस्तै फायरप्लेस वा एक्वैरियमहरू दोहोर्याउनुहोस् र तिनीहरूलाई आफ्ना साथीहरूसँग साझा गर्नुहोस्!
कसरी YouTube भिडियो दोहोर्याउने
जब अनन्त लूपमा उपयोगी युट्यूब भिडियो हो
∞ जब तपाईं एक निर्देशात्मक यूट्यूब भिडियो हेर्नुहोस् र तपाईं यसको विशेष अंश बारम्बार हेर्न आवश्यक छ।
∞ जब तपाईं एक संगीत सुनेको छ कि यति अभ्यस्त छ कि बारम्बार सुन्नु पर्छ ...
∞ उपकरणसँग कार्य नगरी तपाइँले १००० पटकको लागि त्यो हास्यास्पद भिडियो हेर्नुपर्दा।
∞ जब तपाईं विज्ञापन बिना नै YouTube भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ।
युट्यूब दोहोर्याउने बटन
क्रोम, फायरफक्स, ओपेरा, सफारी, माईक्रोसफ्ट एज को लागी Youtube दोहरो बटन प्राप्त गर्नुहोस्।
∞ युट्यूब दोहोर्याउनुहोस् ← यसलाई तपाईंको बुकमार्क पट्टीमा तान्नुहोस्
बुकमार्क बार देख्नुहुन्न? प्रेस Shift+Ctrl+B
यदि म्याक ओएस एक्स प्रयोग गर्दै, प्रेस Shift+⌘+B
वा, पाठ बाकस मुनिको सबै कोड प्रतिलिपि गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईंको बुकमार्क बारमा टाँस्नुहोस्।
❝यो स्क्रिप्टले तपाईंलाई स्वचालित रूपमा YouTube भिडियोहरू लुप गर्न मद्दत गर्दछ।❞
तलको स्क्रीनशट हेर्नुहोस्
राम्रो सुविधा को लागी, हामीलाई बुकमार्क गर्नुहोस्!
प्रेस Shift+Ctrl+D. यदि म्याक ओएस एक्स प्रयोग गर्दै, प्रेस Shift+⌘+D
YouTube लूप प्रयोग गरेर तपाईं सक्नुहुन्छ
दोहोर्याउनुहोस्, काट्नुहोस् र लुप गर्नुहोस्
सम्पूर्ण यूट्यूब भिडियोहरू लुप गर्नुहोस् वा फेरि यसको सेक्सनहरू दोहोर्याउनुहोस्, त्यसपछि तपाईंको सिर्जना साथीहरूसँग साझा गर्नुहोस्!
YouTube भिडियोहरू स्वचालित रूपमा दोहोर्याउनुहोस् (वा केवल त्यसका केही अंशहरू) त्यसका लागि।
तपाईंको मनपर्ने यूट्यूब भिडियो बारम्बार दोहोर्याइएको फेरि प्ले नगरी हेर्नुहोस्।
क्रप गर्नुहोस्, अनन्त लूपको लागि काट्नुहोस्
एक लूप सिर्जना गर्नुहोस्, तपाईंको भिडियोको मनपर्ने भाग क्रप गर्नुहोस् त्यसपछि पूर्ण वा यूट्यूब भिडियोको केही अंश अनन्त लूपमा प्ले गर्नुहोस्।
तपाईंको लूपको समय अनुकूलन गर्नुहोस् (सुरू / अन्त)
YouTube समय प्यारामिटरहरूको लागि समर्थन।
लूप यूट्यूब प्लेलिस्ट
लगईन बिना नै तपाईंको प्लेलिस्टहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
ब्याकअप वा प्लेलिस्ट पुनर्स्थापित।
यूट्यूब दोहोर्याउने प्लेलिस्ट, फेरबदल वा उल्टो युट्यूब प्लेलिस्ट।
लोड गरिएको YouTube भिडियोहरू नियन्त्रण गर्नुहोस्।
स्वचालित रूपमा पूर्णस्क्रीन
कम्प्युटर र स्मार्टफोनमा विज्ञापन बिना युट्यूब फुलस्क्रिनमा हेर्नुहोस्।
स्वचालित रूपमा उपकरणको स्क्रिन फिट गर्न पुनःआकार गर्दछ
गति बढाउनुहोस् वा ढिलो
यूट्यूब गीतहरू सुस्त गर्नुहोस् वा भिडियोहरू द्रुत गर्नुहोस्।
थम्बनेलमा प्ले बटन थप्नुहोस्।
साझेदारी गर्नु अघि शीर्षक परिमार्जन गर्नुहोस्।
अनुकूलित प्रयोगकर्ता अनुभव
सहज भिडियो मा युट्यूब भिडियो को लागी खोज्नुहोस्।
कुनै कष्टकर विज्ञापनहरू छैनन्।
सबै मनपर्ने प्लेटफार्महरू समर्थन गर्नुहोस्
तपाइँ तपाइँको कुनै पनि मनपर्ने प्लेटफर्म जस्तै विन्डोज उपकरण, लिनक्स ओएस, म्याक मेशिन, क्रोमबुक, एन्ड्रोइड, वा आईफोन, आईप्याड, स्मार्ट टिभीमा यूट्यूब लूपर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
सबै नि: शुल्क
छिटो र नि: शुल्क क्रोधित छैन।
यो प्रयोग गर्न पूर्ण नि: शुल्क अनलाइन सेवा हो।
कुनै खाता छैन, कुनै डाउनलोड छैन, केवल संगीत।
सजीलै युट्यूब भिडियो लुप - कुनै अवरोध बिना संगीत सुन्नुहोस्
कसरी स्वचालित रूपमा YouTube भिडियो दोहोर्याउने
त्यहाँ YouTube को दोहोर्याउने प्रतिबन्धहरू वरपर प्राप्त गर्ने तरिकाहरू छन्
तपाइँको मनपर्ने भिडियो खोज्नुहोस् वा माथिको इनपुट बक्समा दोहोर्याउन चाहानुभएको भिडियोको युट्यूब युआरएल (वा भिडियो आईडी) प्रविष्ट गर्नुहोस्। वा तल युट्यूब दोहोर्याउने चाल प्रयोग गर्नुहोस्।
पत्र बदल्नुहोस् t चिठी द्वारा x यूट्यूब डोमेनमा त्यसपछि प्रेस गर्नुहोस् Enter. तपाइँको भिडियो एक लूपमा निरन्तर दोहोरिन्छ।
- यूट्यूबमा नियमित भिडियो फेला पर्‍यो
- मोबाइल संस्करण
- देश लिंकहरू (uk, jp, ...)
- छोटो URL
निरन्तर प्ले गर्ने YouTube भिडियो कसरी बनाउने
एक लूप सिर्जना गर्नुहोस्
YouXube ले तपाइँलाई पूर्ण भिडियो वा एकको एक विशेष भाग दोहोर्याउन एक लूप सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। एक लूप सिर्जना गर्न तपाईले तलका मध्ये एक तरिकाले भिडियो छान्न सक्नुहुन्छ:
पहिलो चरण: भिडियो छनौट गर्नुहोस्
YouTube भिडियोहरू दोहोर्याउन, केवल खोजी क्षेत्रमा एक YouTube भिडियो URL टाँस्नुहोस्।
यदि तपाईं कुन भिडियो लूप चाहानुहुन्छ भनेर निश्चित हुनुहुन्न भने, तपाईं यूट्यूब भिडियोहरूको लागि खोजी गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को पृष्ठमा तपाइँले खोज परिणामहरू फेला पार्नुहुनेछ जहाँबाट तपाइँ तपाइँको मनपर्ने भिडियो छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
चरण दुई: काट्नुहोस्
समय फ्रेम बीचको एक यूट्यूब भिडियो लुप
सुरु / अन्त छनौट गर्नुहोस्
एक पटक तपाईंले आफ्नो भिडियो छान्नुभयो, तपाईं सुरू र अन्त समयहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। केवल तपाईलाई मनपर्ने समयहरूमा सुरूवात र समाप्ति सूचकहरू तान्नुहोस्। अब तपाइँ तपाइँको मनपर्ने YouTube भिडियो दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ।
पूर्वनिर्धारित द्वारा, सुरू / समाप्त समय भिडियोको सुरू / समाप्त हुने समय हो।
चरण तीन: भिडियोको शीर्षक अनुकूलित गर्नुहोस्
एउटा लूपको नाम बदल्नुहोस्
तपाइँले चाहानु भएको लुपको नाम बदल्न सक्नुहुन्छ। एक बचत लूप खोल्नुहोस्, नाम परिवर्तन गर्नुहोस् र बचत बटन क्लिक गर्नुहोस्।
चरण चार: भिडियो थम्बनेल अनुकूलित गर्नुहोस्
एक लूप साझा गर्नुहोस्
तपाईं आफ्नो मनपरेको यूट्यूब भिडियोहरू तपाईंको मनपर्ने सोशल मिडियामा साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ: फेसबुक, ट्विटर, पिन्टेरेस्ट, ईमेल, र व्हाट्सएप वा पाठ सन्देश।
साझेदारी गर्नु अघि, तपाईंको भिडियोको लागि कस्टम यूट्यूब थम्बनेल छवि बनाउनुहोस् व्यक्तिलाई चाखलाग्दो बनाउन।
YouTube लूप प्रयोग गर्न तपाईंसँग HTML5 मिल्दो ब्राउजर हुनै पर्छ।
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू ✉
यहाँ तपाईंको प्रश्न र उत्तरहरू फेला पार्नुहोस् - कसरी यूट्यूब भिडियोहरू लुप गर्ने?
+ यूट्यूब लूप के हो?
यो वेब उपकरण हो जसले अनन्त लूपमा यूट्यूब भिडियोहरू खेल्दछ, यसको मतलब: भिडियो अन्त्यमा कुनै हस्तक्षेप बिना स्वचालित रूपमा फेरि सुरू हुन्छ अन्तमा पुगे पछि।
+ कसरी भिडियोहरू दोहोर्याउने वा लुप गर्ने?
एक लूपमा दोहोर्याउनको लागि YouTube भिडियो प्राप्त गर्नु आधारभूत कार्य जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो गर्न आश्चर्यजनक कुरा हो र यसले धेरै दर्शकहरूलाई निराश तुल्याउन सक्छ।
भाग्यवस, त्यहाँ तीन मनपर्दो सरल विधिहरू तपाईंको मनपर्ने यूट्यूब संगीत भिडियो वा फिल्मको ट्रेलर लुप गर्नको लागि हो, र तिनीहरू सबै पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छन् र आईफोन र एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू र विन्डोज, म्याक, र लिनक्स कम्प्युटरहरू सहित सबै प्लेटफार्महरूमा काम गर्दछन्।
• विधि १. युट्यूबमा: भिडियोको विन्डोमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र लूपमा क्लिक गर्नुहोस्
• विधि २. YouXube मा:
- पृष्ठको शीर्षमा इनपुट बाकसको साथ भिडियो खोज्नुहोस्, र परिणाम सूचीबाट एउटा भिडियो छनौट गर्नुहोस्।
- तपाइँ YouTube भिडियोको URL प्रतिलिपि गर्नुहोस् जुन तपाइँ लूप गर्न चाहानुहुन्छ र युट्यूब भिडियोको URL पृष्ठको शीर्षमा इनपुट बक्समा राख्नुहोस् र त्यसपछि अनन्त प्रतिमा थिच्नुहोस्। ∞
- भिडियोको आईडी प्रतिलिपि गर्नुहोस् जुन तपाईं लूप गर्न चाहानुहुन्छ र युट्यूब भिडियोको आईडी पृष्ठको शीर्षमा इनपुट बक्समा राख्नुहोस् र त्यसपछि इन्फिनिटी प्रतिमा थिच्नुहोस्। ∞
• विधि:: आईफोन, आईप्याड, वा आइपड टचमा नि: शुल्क संगीत अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस् (एन्ड्रोइड उपकरणहरूको लागि यूट्यूब रिपीटरहरू पनि छन्)।
+ वेब ब्राउजरबाट यूट्यूब भिडियोहरू कसरी लूप गर्ने?
के २x भन्दा बढि वेगमा YouTube भिडियोहरू हेर्ने तरिका छ?
⓵ हालसालै, YouTube ले भिडियो प्लेब्याक २ पटक मात्र गति गर्दछ।
⓶ भिडियो क्षेत्रमा राइट क्लिक गर्नुहोस्, वा यदि तपाईं टच स्क्रिन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने लामो-प्रेस गर्नुहोस्।
⓷ मेनूबाट लुप चयन गर्नुहोस्।
यस बिन्दुबाट अगाडी, भिडियो निरन्तर लुप हुनेछ जब सम्म तपाईं लूप सुविधा असक्षम गर्नुहुनेछ, जुन तपाईं लुप विकल्प अनचेक गर्न माथी चरणहरू दोहोर्याएर गर्न सक्नुहुन्छ, वा पृष्ठ ताजा गरेर।
+ अनुप्रयोग स्थापना नगरी कसरी आईफोन वा आईप्याडमा YouTube भिडियोहरू लुप गर्ने?
डेस्कटप वा ल्यापटप कम्प्युटरमा, YouTube ले तपाईंलाई तपाईंले हेरिरहनु भएको भिडियो स्वचालित रूपमा दोहोर्याउन अनुमति दिन्छ। थप रूपमा, त्यहाँ नि: शुल्क, तेस्रो-पक्ष सेवाहरू छन् जुन तपाईंलाई दोहोर्याउने भिडियोहरूको साथ सहयोग गर्न सक्दछ।
यदि तपाइँ कम्प्युटरमा युट्युब भिडियोहरू लुप गर्ने बिभिन्न विधिमा प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ वा तपाईं लुकाइएको मेनू विकल्प नदेखाउने स्मार्टफोन जस्तै उपकरण प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, YouXube वेबसाइट राम्रो विकल्प हो।
YouXube एक नि: शुल्क वेबसाईट हो जसले कसैलाई पनि युट्युब भिडियो दोहोर्याउन सुरू गर्दछ मात्र मात्र भिडियोको यूआरएललाई यसको खोज क्षेत्रमा प्रविष्ट गरेर। सबै भन्दा राम्रो, यो कुनै पनि उपकरणमा कुनै पनि वेब ब्राउजरमा गर्न सकिन्छ।
+ म कसरी मोबाइल उपकरणहरूमा यूट्यूब यूआरएल को प्रतिलिपि र टाँस्ने?
कम्प्युटरमा तपाईले कुञ्जीपाटी सर्टकटको साथ लिंकलाई द्रुत रूपमा प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुनेछ Ctrl + C र लिंकलाई कुञ्जीपाटी सर्टकटको साथ टाँस्नुहोस् Ctrl + V.
एक मोबाइल उपकरणमा, थिच्नुहोस् र समाउनुहोस् र त्यसपछि प्रतिलिपि वा टाँस्न विकल्प छनौट गर्नुहोस्।
+ के यो पृष्ठ एक YouTube साझेदार हो?
यो पृष्ठ युट्यूबसँग सम्बन्धित छैन।
यो साइट एक यूट्यूब पार्टनर होईन र यूट्यूब भिडियो दोहोर्‍याउने आधिकारिक तरीका होइन, यो केवल तेस्रो पक्ष विकल्प हो।
+ के यो YouTube दोहोरिएको सेवा प्रयोग गर्न सुरक्षित छ?
सुरक्षा हाम्रो सर्वोच्च प्राथमिकता हो, त्यसैले यो वेबसाइटको सम्पूर्ण डाटा यातायात SSL एन्क्रिप्टेड हो। यस सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकलको साथ, तपाईंको डाटा तेस्रो पक्षहरूद्वारा पहुँचबाट सुरक्षित गरिएको छ।
+ के यो हडताल यूट्यूब भिडियो छ, जब तपाइँ यो हेर्दै?
तपाइँको ब्राउजर पुन: शुरू गर्नुहोस्।
तपाईंको कम्प्युटर वा फोन वा ट्याब्लेटको सीपीयू उपयोग जाँच गर्नुहोस्। यदि तपाईं देख्नुहुन्छ कि यो धेरै माथि छ (%०% भन्दा बढि) केहि प्रक्रियाहरू मार्न कोसिस गर्नुहोस्, वा तपाईंको उपकरण पुनःस्टार्ट गर्नुहोस्।
यदि यो सम्भव छ भने यूट्यूब भिडियोको एक कम गुणमा स्विच गर्नुहोस् (80 .० पी वा कम)।
+ढिलो गति वा द्रुत गतिमा YouTube भिडियोहरू कसरी हेर्ने?
यूट्यूबमा भिडियो प्लेब्याक गति कसरी परिवर्तन गर्ने?
यी चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्
तपाईंको ब्राउजरमा कुनै पनि YouTube भिडियो खोल्नुहोस्
सेटिंग्स कोगको लागि खेलाडीको तल-दायाँ तिर हेर्नुहोस् (यसले एचडी माथि माथि भन्दछ)
स्पीड विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस् (यो पूर्वनिर्धारित रूपमा सामान्यमा हुनुपर्दछ)
तपाईंको प्लेब्याक गति छनौट गर्नुहोस्
सुस्त गति: 0.25, 0.5, 0.75
गति बढाउनुहोस्: 1.25, 1.5, 2
वैकल्पिक रूपमा, तपाईं यूट्यूबमा भिडियो खोल्न सक्नुहुनेछ, जससँग दुई बटनहरू छन् जुन कन्ट्रोलरमा गति बढाउन वा घटाउनको लागि छ।
यो केहि यस्तै प्रश्नहरूको उत्तर हो।
कसरी YouTube भिडियोहरू बढाउने वा धीमा गर्ने?
कसरी एक छिटो गतिमा YouTube भिडियोहरू हेर्न?
के हामी प्लेब्याक गति विकल्पमा वृद्धि गर्न सक्दछौं?
ढिलो गति वा द्रुत गतिमा YouTube भिडियोहरू कसरी प्ले गर्ने?
+ कसरी YouTube भिडियोहरू (2x, 3x र 4x भन्दा बढि) स्पीड गर्ने?
हालसालै, YouTube ले भिडियो प्लेब्याक २ पटक मात्र गति गर्दछ।
+ एन्ड्रोइड र आईफोनमा यूट्यूब प्लेब्याक गति कसरी परिवर्तन गर्ने?
हामीले सुरू गर्नु अघि, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं अनुप्रयोग स्टोर वा गुगल प्लेमा जानु भएको छ र यूट्यूब अनुप्रयोगको नयाँ संस्करणमा अपडेट गर्नुहोस्।
अनुप्रयोगमा कुनै पनि YouTube भिडियो खोल्नुहोस्
भिडियो ट्याप गर्नुहोस् ताकि तपाईं स्क्रीनमा सबै बटन ओभरलाइड देख्न सक्नुहुनेछ
तपाईंको स्क्रिनको माथि-दायाँ कुनामाdडटहरू ट्याप गर्नुहोस्। यसले भिडियो सेटिंग्स को एक समूह खोल्छ।
सेटिंग्स को सूची मा, प्लेब्याक गति ट्याप गर्नुहोस्। यो पूर्वनिर्धारितमा सामान्यमा सेट गर्नुपर्दछ।
केवल आफूले चाहेको गतिमा ट्याप गर्नुहोस्, र तपाईं तयार हुनुहुन्छ।
जब तपाईंको मोबाइल फोन वा आईफोनमा, यदि तपाईंले नेटिभ मोबाइल अनुप्रयोगको सट्टा मोबाइल वेब प्लेयर (m.youtube.com) मा यूट्यूब भिडियोहरू प्ले गर्न छनौट गर्नुभयो भने, तब तपाईं यूट्यूब डोमेन यूट्यूब हुन सक्नुहुन्छ।
+ कसरी निश्चित बिन्दुबाट युट्यूब भिडियो लुप गर्ने?
तपाइँ कसरी समय फ्रेम बीच एक यूट्यूब भिडियो लूप गर्नुहुन्छ?
भिडियोको एक भाग मात्र लुप गर्न युट्यूब पुनरावर्तकमा स्लाइडर तान्नुहोस्।
+ मोबाइलमा युट्यूब प्लेलिस्ट कसरी लुप गर्ने?
तपाईंको ब्राउजरमा कुनै पनि YouTube प्लेलिस्ट खोल्नुहोस्
यूट्यूब डोमेन परिवर्तन गर्नुहोस् YouXube र तपाइँ सबै सेट भयो।
एक साधारण YouTube भिडियो लुपिंग उपकरण
लूप सिर्जना गर्न कहिल्यै सजिलो भएको छैन! एक YouTube भिडियो वा यसको एक अंशको स्वचालित पुन: प्ले सक्षम गर्दछ।
महान अनुप्रयोग, लुपहरू प्ले गर्न वा गाउन गीतहरूको भागहरू सिक्नको लागि उत्तम सहयोग हो।
स्पिच-भाषा रोगविज्ञानी, London
यो म अभ्यासको साथ खेल्ने क्रममा संगीतको क्षेत्रहरू दोहोर्याउन खोजिरहेको थियो जुन मात्र हो। साझेदारी सुविधा कुनै पनि विद्यार्थी / ब्यान्ड / क्लब समूहमा अन्यसँग भिडियो खण्डहरू साझेदारी गर्न उत्कृष्ट हुनेछ।
उच्च विद्यालय शिक्षक, Paris
म मेरो व्यायाम दिनचर्याको लागि प्लेसूचीहरू सिर्जना गर्न यो अनुप्रयोग प्रयोग गर्दछु। तपाईं केवल एक ट्र्याक दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ वा स्वत: प्ले छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जसले तपाईंलाई प्लेसूचीमा सबै संगीत सुन्न दिन्छ। भरपर्दो अनुप्रयोग।
सूचना सुरक्षा विश्लेषक, Silicon Valley
मलाई मनपर्दछ कि तपाईं कसरी भिडियोको निश्चित समयहरू बीच लूप सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ! निश्चित रूपमा मेरो मनपर्ने अनुप्रयोगको अंश।
यस अनुप्रयोगलाई माया गर्नुहोस्! मेरो मनपर्ने गीतहरू लुप गर्न यत्तिको सजिलो बनाउँदछ!
आर्थिक सल्लाहकार, Amsterdam
ठ्याक्कै के मलाई चाहियो। एक संगीत विद्यार्थीको रूपमा, म गीतहरू सुन्न सक्छु म लुपमा सिक्न कोशिस गर्दैछु बारम्बार प्ले हिट नगरी।
मलाई मन पर्छ कि यदि भिडियो तपाईं चाहनुहुन्छ भन्दा लामो छ भने, तपाईं छोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। मलाई त्यो मन पर्छ। कुनै ग्लिचहरू वा विज्ञापनहरू छैनन्, म यो प्रेम नगर्ने कुनै कारण देख्दिन।
संगीत प्रेमी, Munich
यो एक उत्तम अनुप्रयोग हो जुन वर्णन अनुसार ठीक काम गर्दछ। म यससँग धेरै खुसी छु र सिफारिस गर्दछु।
मलाई मनपर्ने संगीत र तिनीहरूलाई एक लूपमा राख्नु मात्र मलाई सन्तुष्ट पार्छ र मलाई आराम गर्न मद्दत गर्दछ।
यस अनुप्रयोगलाई मनपराउँदछ जब तपाईं युट्यूबमा चाहानु भएको गीतको विस्तारित संस्करण फेला पार्न सक्नुहुन्न यस अनुप्रयोगलाई बनाउनुभएकोमा धन्यवाद।
अहिले सम्म यो केहि कुरा हो जुन मलाई केही गितारको भागहरु लाई अलग गर्न र अभ्यास गर्न चाहिन्छ।
मनोवैज्ञानिक, Rio De Janeiro
म यो अद्भुत अनुप्रयोग को devs को सराहना गर्दछु, दु: खीको रूपमा YouTube ले लुप सुविधा समर्थन गर्दैन तर यो अनुप्रयोग बनाउनु भएकोमा धन्यवाद।
कम्प्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट, San Francisco
यो शुरुवातकर्ताहरूको लागि राम्रो हो किनकि तिनीहरूले यसलाई लुप गर्न र गीत सजीलै सिक्न सक्छन्
संगीत मात्र होइन सबै भिडियोहरूको लागि राम्रो काम गर्दछ।
वित्तीय प्रबन्धक, Florence
यो नरोकेसम्म दोहोरिन्छ त्यसैले म राम्रोसँग सुत्न सक्दछु
कार मेकानिक, Toronto
व्याख्यान भाषा र अध्ययनको लागि पनि उत्कृष्ट। म प्ले वा रिजोलुसनको गति नियन्त्रण गर्न सक्दछु।
यस वेबसाइटको साझेदारी अन्य धेरै उपयोगी सुविधाहरू विकास गर्न अनुप्रयोगको लागि प्रोत्साहन हो
हाम्रो सेवा प्रयोग गर्नुभएकोमा धन्यबाद!
© YouXube 2019 - यूट्यूब प्लेयर 0.0.1